Banyere Micen - MICEN CO., LTD
Micen, onye na emeputa ihe na eme ihe site na imewe na ihe ohuru
Ngwọta Nkwakọ ngwaahịa
Innovation & nghọta
Ọhụụ na-adịgide adịgide
Ngwọta Ngwaahịa Na-adịgide adịgide
Micen bụ onye nrụpụta na - eto eto na - eweta ihe nkwakọ ngwaahịa dị iche iche na arụ ọrụ maka mma na ụlọ ọrụ. Malite na onye na-emepụta ihe maka karama iko na 2006, ọ nwere ọfịs na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na china na Australia. Micen na - etolite nwayọ nwayọ ma na - agbasi mbọ ike ime ihe ndị ị kpebiri ime.
Micen azụmahịa gbakwasara anọ isi eme: emebe, na-emepe emepe, sourcing na n'ichepụta nkwakọ ngwọta maka ọgwụ na ahụ ike na mma na ngwaahịa.
Factorylọ ọrụ mmepụta ihe nke dị na Wuxi obodo nwere ihe karịrị 10000 square mita GMP standard production site. Ikpokọta ngwaahịa na-mere nke iko, plastic na Aluminom.
Micen na-enye ọ bụghị naanị ngwugwu ọkọlọtọ kamakwa ngwugwu ahaziri maka mmanụ dị mkpa, na-esi isi ụtọ, nlekọta anụ ahụ na mma. Mmepụta akara ekpuchi iko vial Ndinam, plastic-injection, alu-punching, anodizing, nzukọ, silk ihuenyo ebi akwụkwọ na-ekpo ọkụ zọ. Rite uru na sistemụ ERP, Micen na-agba mbọ mgbe mgbe iwulite ụlọ ọrụ "nghọta" nke ndị ahịa anyị ma na - ahụ oge ngwa ngwa.
Micen amata obere ikike ịchọpụta nkwakọ ngwaahịa. N'ihe karịrị afọ iri nke mmepe na ịmịpụta ahụmịhe nkwakọ ngwaahịa, Micen na-ebuputa ụwa niile n'ọtụtụ ụdị ihe ịchọ mma dịka AVON, L'oreal, Dior na ndị ọzọ.
Micen imewe ụlọ ọrụ Fanso imewe na Shanghai bụ nnukwu nkwado maka ngwaahịa imewe na mmepe. Micen na Fanso na-arụkọ ọrụ ọnụ iji nye ndị ahịa eco-friendly, kediegwu packagings yana ọmarịcha ọrụ maka ndị ahịa anyị.
Ngosipụta ụlọ ọrụ (ụlọ ọrụ)
Ihe gafere site na asambodo ruru eru nke mba wee nata nke ọma na ụlọ ọrụ anyị. Ndị ọrụ injinia ọkachamara anyị ga - adị njikere ijere gị ozi maka nyocha na nzaghachi.
Kpọọ na: 0086-510-86100676 ma ọ bụ Email: micen@micentech.com